Faalo :Gobolka Baargaal Taariikh iyo Horumar - BAARGAAL.NET
Baargaal faalo featured Gobolka Baargaal
Faalo :Gobolka Baargaal Taariikh iyo Horumar
✔ Admin on March 21, 2013
Tan iyo sannadkii 2004 waxaa ay dadweynaha ku nool Degmada Baargaal raadinayeen in Degmada Baargaal laga dhigo gobol buuxa oo leh xuquuda ay gobolada kale ee Puntland Leeyihiin
Waxa xaqiiq ah in ay Baargaal leedahay oo ay buuxisay waa hore shuruudaha lagu noqdo gobol. Shuruudahaas waxaa ka mid ah dhaqaale iyo tiro dad iyo baaxad dhuleed , iyo horumar dhinaca adeegyada bulshada sida , Biyaha , Korontada , Isgaarsiinta iwm
Hadii Gobolka Baargaal la bar-bar dhigo gobolada kale ee Puntland , waxa kuu muuqanaya in ay qaar badan ka horeeyso. Nasiib daro weli Baargaal looma aqoonsan in ay Gobol tahay, taana waxa Hortaagan weli lama garan !!!
In kasta oo aan ogahay in aragtida koowaad ee dadka akhrista faaladan ay kala duwanaan doonto , hadana waxaa dhamaan maskaxda lagu hayaa qodobo , caqab ku ah Gobolka :
waxaa Jira Rag Iskood ushaqa-tegay oo Xilal Kala duwan haya , laakiin waxay nimankaasi ilaawayn in aan Miisaan Siyaasadeed lagu badali karin waaqic laguna dhisi karin magaalo . nimankaas waxaa leenahay Habar fadhida Lagdin la fudud!”.socda oo magaaladiina dhista ...
Murti Soomaaliyeed baa tiraahda : “Xukun waxaa kaa qaada: GAR QALLOOCAN, GACAN LAABAN iyo GUDDOON JILICSAN” , Murtidaasi waxay ka tarjumaysaa nimanka horboodaaya Barnaamajka Gobolka Baargaal , inta go’aan qaataan haddana ka laabta...
Ugu Danbayntii markii wax laysku qabto oo laysmari waayo , oraahda caanka ah ee gobolka baargaal hada ka calanwadaynaysa waa “Indhahaa kuu Macallina”